Daawo Sawirada Sida Quruxda badan ee loo dhisay garoonka Muqdisho Stadiom - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Daawo Sawirada Sida Quruxda badan ee loo dhisay garoonka Muqdisho Stadiom
Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa dib u dhis balaaran ku sameesay garoonka kubada cagta ee Muqdisho Stadiom oo sanado badan aheyd xero ciidan iyo meel ka caagan kubadii loogu tala galay in lagu ciyaaro.
Muuqaalka garoonka ayaa markii hore ahaa mid bur bursan oo xero milatari ah, hasa ahaatee mudo yar ayaa muuqaalkii hore ee garoonka isku bedelay kadib dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameeyay.
Wasaarada Ciyaaraha iyo Dhalinyarada xukuumada Soomaaliya ayaa soo gabo gabeesay dhismaha garoonka Muqdisho gaar ahaan qeybta kubada cagta, waxaana garoonka loo dhisay si lamid ah garoomada casriga ah.
Madaxda dowlada federaalka Soomaaliya aya ala filayaa in si rasmi ah xariga uga jaraan dib u dhiska garoonka lagu sameeyay, waxaana furitaanka kadib la filayaa in lagu qabto tartamo ciyaareed kala duwan.
Garoonka kubada cagta Soomaaliya ayaa ah kan ugu weyn Soomaaliya, waxaana garoonkan horey loogu qabtay kulamo caalami ah iyo horyaalka dalka, hasa ahaatee sanadihii ugu dambeeyay ayaa garoonka isku bedelay xero milatari.
Previous articleXog+sawiro saraakiil xafiiska madaxweyne ku xigenka galmudug bux dhafiyay mxa soo kordhay?
Next articleUgaaska Beesha Mudulood oo dalbaday in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dhacdadii GOLOLEY